Tuesday August 18, 2015 - 21:21:15 in Wararka by Warsheekh Media
Beesha Hiraab oo ka mid ah beelaha dega magaalada Muqdisho, balse dhibaatadii ka dhacday caasimada dalka udub dhexaad u ahaa, ilaa xilligii Maxkamadaha ay la wareegaan talada dalka ilaa Dowladdihii KMG ah ee iyaguna kala sii wareegay, ayaa waxaa soo
Beesha Hiraab oo ka mid ah beelaha dega magaalada Muqdisho, balse dhibaatadii ka dhacday caasimada dalka udub dhexaad u ahaa, ilaa xilligii Maxkamadaha ay la wareegaan talada dalka ilaa Dowladdihii KMG ah ee iyaguna kala sii wareegay, ayaa waxaa soo jiitamayay dagaal hoose oo iminka u muuqda inuu ka soo dhex baxayo xeyndaabka dowladnimada dalka ee u hartay muddo ka yar sanad.
Tan iyo markii ay talada dalka maamuleysay Dowladda Federaalka oo is bed bedelayeen Golaheeda sare xifaaltanka beesha Hiraab saameyn ayay ku lahayd, waxaana sida lala wada socdo dowlad kasta oo isku dayda inay dib u soo celiso xarumihii Dowladdu lahayd ka hor imaanayay caqabado waaweyn oo ay ugu yaraayeen dadweynihii degenaa guryahaasi oo warbaahinta ka aflagaadeynaya mas'uuliyiinta Dowladda.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa waxa uu wajahayaa dagaalkii ugu weynaa ee uga imaanaya xubnaha ka tirsan Dowladda Federaalka, kuwaasi oo ku diidan inuu dib u soo celiyo bilicdii magaalada Muqdisho oo noqotay mid ammaankeeda lagu aamino dhagxaan.
Xifaaltankii ugu dambeeyay shalay ayuu dhacay, kaddib markii xarun ay leedahay Hay'adda WFP isku dayday inay wadada xirato, taasi oo uu ka diiday Guddoomiye Muungaab isla markaana ku eedeeyay inay howlihiisa soo faragelisay.
Waa muhiim in marka la qiimeeyo xaaladda magaalada Muqdisho la adkeeyo ammaanka xafiisyada hay'adaha caalamiga ah kuwooda bulshada u haya howlaha muhiimka ah, balse waxaan meesha kuma jirto in la isku qabto 'wadada halla xiro iyo halla furo'.
Xifaaltankaan Muqdisho ka jira oo beesha Hiraab hormuudka u tahay, haddii uu sii socdo waxaa ka dhalan kara ma aha waxa aan isku sheegeyno, balse bulshada reer Xamarka ah ma aha wax ay dhegahooda u adkeysan karaan inay maqlaan in xifaaltankaan cusub uu ka soo bilowdo goobaha Dowladda ha laga baxo, waddo la furo iyo mid la xirto.
Magaalada Muqdisho oo maanta la daalaa dhaceysa nabaraddii ka soo gaaray dagaalkii Maxkamadaha iyo midkii Al-Shabaab, ayaa waxay maanta waxay qarka u saaran tahay inay dib u noqoto ee ahaa dagaaladii sokeeye ee qabiilka ku saleysnaa, tiiyo Muqdisho loo diidan yahay in shanqarta ka soo yeereysa ay noqoto mid maqalkeedu aad u wanaagsan yahay hoggaankana u heysa dowladnimo taam ah, horumar, nabad iyo cadaalad.